Cadceed aad u kulul, abaar iyo shidista dab oo la mamnuucay. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cadceed aad u kulul, abaar iyo shidista dab oo la mamnuucay.
La daabacay onsdag 24 juli 2013 kl 11.50
Cadceeda kulul oo sababtay in ay qalalaan dhirta kuwa yar yar sida cawska Sawirle: Karl-Josef Hildenbrand/Scanpix
Qeybo badan oo dalka ka mid ah waxaa hadda ka jira cimilo aad u kulul oo qaleyl ah. Sida ay ku sheegtay hay’ada cimilada ee SMHI gobolda dalka ee Götland iyo Svealand waxaa ka jira khatar aad u sarreysa oo ah in dab uu ka kaco duurka iyo dhulka banaan.
Markii ay qalasho dhirta cowska ah ee dhulka ka baxda, waxaa soo baxa amaro mamnuucayo in dab la shido waxaana ilaa iyo imminka amarada sidaasi ah ay ka soo baxeyn gobolada kala ah Kronoberg, Jönköping, Örebro iyo Värmlands.
Markii la saaro amarada ah in dab aan la shidin ayaa taasi micnaheedu waxa uu yahay in wax dab ah aan lagu isticmaali karin duurka, meelaha banaan iyo meelaha dhirta waa weyn ka baxaan.
Habka dabka wax lagu dubto ee afka Iswidhishka lagu yiraahdo ´´Grillning’’ ayaa keliya waxaa la oggolyahay in lagu sammeeyo meelo gaar ah sida, goobo ay ku yaallaan jikooyin shub, dhagx ama wax la mid ah ka sammeysan ama barxadaha guryaha filooyinka.
Dabka mar qura la isticmaalo lama oggola in la shido oo lagu istcimaalo meelaha duurka ah xilliyadan cadceeda kushahay waayo iyaguba waa halis.
Hay’adda saadaasha hawada ee SMHI ayaa iyana istcimaashay hanaankeeda digniinta. Maalintii Isniinta ayay hay’adda waxay digniin cimilo aad u kulul ka soo saartay gobolada Skåne iyo Blekinge
Kolkii saadassha cimilada ay tilmaameyso heer kul cadceed oo gaarsisan 30 garaado oo saddex cisho oo isku xigta, waxaa la soo saaraa digniin heerka kowaad ah. Haddi heer kulka cadceeda uu yahay ugu yaraan 33 garaad saddex maalin oo xiriir ah, waxay hay’ada saadaasha soo saartaa digniin heerka labaad ah.
Markii heer kulka lagu qiyaasayo in muddo saddex cisho oo xiriir ah ay ka badaneyso 26 grader, waxay hay’adda saadaasha soo saartaa fariin cimilo kulul waxayna digniinta u diraan qeybaha adeega caafimaad iyo daryeelka.
Hanaankan cusub ee digniinta cimilada kulul ayaa salka ku heysa cilmi baaris uu sammeeyay macallin heer jaamacad ah oo wax ka dhiga cilmiga deegaanka.
Professor-kan oo la yiraahdo Bertil Forsberg ayaa sheegay in halista ah in qof uu u geeriyoodo heer kulka cimilada in ay sare u kaceyso boqolkiiba toban marka heer kulka cadceeda uu yahay in ka badan 26 digrii muddo saddex maalin oo xiriir ah.
Cimilada kulul ayaa halis au ah dadka xanuunsan iyo kuwa da’da ah. Halista ayaa sii kordheysa marka ay heer kulka caceeda uu sare u sii kaco.Isha warka: TT/ Länsstyrelsen i Jönköpings län/ SMHI